Maxaa Muddo 2 Isbuuc Ah Isbitaalka Dhigay Aishwarya Rai Bachchan Iyo Seygeeda Abhishek Bachchan? - Hablaha Media Network
Maxaa Muddo 2 Isbuuc Ah Isbitaalka Dhigay Aishwarya Rai Bachchan Iyo Seygeeda Abhishek Bachchan?
HMN:- Aabaha dhalay atariishada caanka ah ee shirkadda aflaanta dalka India Bollywood Aishwarya Rai Bachchan ee lagu magacaabo Krishnaraj Rai ayaa muddo laba Isbuuc ah isbitaal ku jiray.
Tani waa sababtii ka dambeysay inay Aishwarya Rai Bachchan si dhaqsi ah uga soo laabato dalxiiskii ay ku tagtay Dubai, halkaasoo ay Sannadka Cusub kula soo xuseysay seygeeda Abhishek Bachchan iyo gabadheeda Aaradhya.
Iyadoo Aishwarya ay kusoo laabatay Mumbai, Abhishek oo ah seygeeda ayaa isna go’aansaday inuu kasoo duulo magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaasoo uu howlo shaqo u joogay.
Wuxuuna qudhiisu wuxuu kusoo laabtay Mumbai ka hor waqtigii la qorsheeyey si uu uga war doono xaaladda uu ku jiro sodogiis oo aan wanaagsaneyn.
Ilo ku dhow qoyskaan ayaa u sheegay shabakadda PV Times: “Haa, muddo ku dhow laba Isbuuc ayuu isbitaalka ku jiray. Aishwarya ayaana haatan xaaladdiisa ka taxadareysa halka Abhishek uu isna kasoo laabtay New York halkaasoo uu howlo shaqo u joogay. Wuxuuna si dhow uga warhayaa xaaladda sodogiis”.
Aishwarya Rai Bachchan ayaa lagu soo waramayaa inay haatan ka warqabto xaaladda aabaheed sidoo kalena ay gabadheeda Aaradhya iyadu ka warheyso. Abhishek Bachchan ayaana isbitaalka la yimid xaaskiisa Aishwarya.